अब नेपालमै बन्ने भए यस्ता गाडी, १२ वटा उद्योग दर्ता, कुन–कुन कम्पनी आए ? « हाम्रो ईकोनोमी
अब नेपालमै बन्ने भए यस्ता गाडी, १२ वटा उद्योग दर्ता, कुन–कुन कम्पनी आए ?
नेपालमा सवारीको एसेम्बल गर्ने उद्योगको कागजी संख्या २४ पुगेको छ । दर्ता भए पनि यीमध्ये अधिकांश कम्पनीले काम भने थालेका छैनन् । २४ वटामध्ये धेरैले विद्युतीय मोटरसकाइल र स्कुटर उत्पादनको लक्ष्य राखेका छन् । तर, उद्योग विभागमा दर्ता भएका ती उद्योगले कहिलेबाट उत्पादन थाल्छन् भन्ने यकिन छैन ।
पछिल्लो समय नेपालमा स्वदेशी र विदेशी कम्पनीले गाडी एसेम्बल गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्न निकै चासो दिन थालेका छन् । बितेको १ वर्षभित्र मात्रै १२ वटा नयाँ कम्पनी यो क्षेत्रमा थपिएको उद्योग विभाग बताउँछ ।
बारामा उद्योग राख्ने गरी नेपाल जियान्ट कार इन्डस्ट्री दर्ता गरिएको छ । ४९ करोड पुँजीको यो कम्पनीले पनि इलेक्ट्रिक स्कुटरर कार उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । ललितपुरमा उद्योग रहने गरी बेल्ला मोटर्स कम्पनी दर्ता छ । २ अर्ब पुँजीको यो उद्योगले विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने भनिएको छ ।
काठमाडौंमा होङ्फा मोटरसाइकल एसेम्बल कम्पनी, ट्रस्ट इलेक्ट्रिकल बाइक तथा चोङ्ली इन्टरनेशनल ट्रेकिङ, नवलपरासीमा हुलास अटो क्राफ्ट, मोरङमा ग्लोबल अटो मोबाइल र नवलपरासीमा हिमालयन रबर कर्पोरेशन पनि नेपालमा सवारी उत्पादनकै लागि दर्ता भएका उद्योग हुन् । यसमध्ये हुलास अटो क्राफ्ट अहिले नेपालकै एक मात्रै सक्रिय अटोमोबाइल एसेम्बल कम्पनी हो ।
निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चमा बहस गर्न तयार छु : पर्यटन मन्त्री भट्टराई
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अनुमती मिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय